Sidee Loo Sameeyaa Mawduucyada Ka muuqda Pinterest? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo sameeyaa mawduucyada ka muuqda Pinterest?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 346
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira qalab fara badan oo ka dhexjiray mowjadda cusub ee shabakadaha bulshada iyo aaladaha isgaarsiinta ee nolosha siiya fikradaha dadka. Marka la eego mawjaddan tiknoolajiyadda ah, Pinterest ayaa yimid taas oo noqotay cunsur hal abuur u leh dadka maanta.
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in maskaxda lagu hayo dhammaan tillaabooyinka iyo shuruudaha shaqsiyadeed si loo xakameeyo mowduucyada ka muuqda bogga rasmiga ah ee Pinterest. Intaas waxaa sii dheer, waa faa'iido in aan lumin waqooyiga baaritaanka la sameynayo.
Si kastaba ha noqotee, fulinta tallaabooyinka noocan ahi waa mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee la kulanka dakhliga ku habboon dadka ku jira bogga.
Pinterest sida qalab dijitaal ah
Markaad rabto inaad hesho barxad "inaad ku riyooto", Pinterest waxay qaadataa fikradeeda noloshaada. Tani waxay sabab u tahay tirada badan ee xulashooyinka jira sabab kasta ha noqotee, dhacdo ama qurxin ku dhex jirta qaabka bohemian iyo / ama qaab xirfadeed.
Barxadda isgaarsiinta waxay la qabsaneysaa dhowr waxyaalood oo nolosha siiya fikradaha adeegsadayaasha, laakiin sidoo kale waxay fursad u siineysaa waxaad rabto inaad ku sameyso iyaga mustaqbalka.
Hawlaha ugu muhiimsan ee Pinterest
Barxadda Pinterest waxay leedahay wax walba oo loogu talagalay si aad u noqotid mid ka mid ah bogagga ugu fiican adduunka, dhab ahaantii waa suurtagal macquul ah in nolol laga sameeyo shabakadaha. Tan iyo markii la abuuray, kamay lumin macnaha ay abuurayaashu siiyeen iyada oo aan wax fadeexado ah lagala kulmin, maxaa yeelay si kasta oo ay u hagaajiyeen tayada shaqooyinkooda.
Thanks to noocan ah barxadda, adeegsadayaashu waxay leeyihiin hawlo kala duwan oo nolol siiya adduunyo fursado ku dhex leh qurxinta, fikradaha xirfadeed iyo dhammaan dareenka muuqaalka ee maanta jira.
La imo fikrado aad ku hormarinaysid qaab nololeedkaaga
Miyuu leeyahay faylalka faylalka ee xulashooyinka da 'kasta
Waa fikrad fiican inaad qorshooyinkaaga siiso aragti cusub
Muhiim ma aha inaad xiriir joogto ah la yeelato abuurayaasha fikradaha
Sidee loo xakameynayaa mawduucyada 'Pinterest'?
Qalabka isgaarsiinta laftiisa, waa suurtagal in la waafajiyo mowduucyada loo baahan yahay maalinba maalinta ka dambeysa fulinta howlaha iyo xitaa soo jiidashada dad badan. Ama ka mid noqoshada ganacsi ama koritaanka bogga.
Talaabooyinka lagu soo qaado mawduucyada Pinterest
Raadi barnaamijka oo ku soo dejiso qalabkaaga gacanta ama kombiyuutarkaaga
Gali xogta diiwaangelinta
Tag xagga sare ee bogga oo guji ikhtiyaarka: "Wax ka beddel goobaha"
Hubi ama calaamadee mowduucyada ka muuqda aaladda
Ku dhammee adiga oo si toos ah u riixaya badhanka: "way dhammaatay"
Pinterest waa mid aad u fudud in la isticmaalo isgaarsiinta, markaa marka isbedelka la sameeyo, fursado cusub ayaa isla markiiba ka dhex muuqan doona quudinta. Sidoo kale, fikradaha ayaa xitaa kasii muhiimsan maxaa yeelay iyagu waa xulashooyinka lagu sameeyay shuruudaha lagu xushay fikradahaaga shaqsiyeed.
1 Pinterest sida qalab dijitaal ah
1.1 Hawlaha ugu muhiimsan ee Pinterest
2 Sidee loo xakameynayaa mawduucyada 'Pinterest'?
2.1 Talaabooyinka lagu soo qaado mawduucyada Pinterest
Waxaa laga yaabaa 11, 2021
Sida loo sameeyo koonto Youtube?
Baro sida loo xadido xogta moobilka YouTube-ka